musha > Travel Europe > Nockherberg Starkbierfest – Munich Strong Beer Festival
Munich, Bavaria guta, musha zvivako emakore-kare uye wanda mamiziyamu. The guta inozivikanwa waiitwa gore negore Oktoberfest yayo doro dzimba, kusanganisira famed Hofbrauhaus, rakavakwa 1589. Munguva Altstadt (Old Town), nechepakati Marienplatz sikweya rine varipo akadai Neo-Gothic opret Rathaus (guta horo), ane mukurumbira glockenspiel anoratidza kuti chime uye reenacts nyaya kubva muzana remakore rechi16.
The doro mutambo simba ndezvevanhu Munich kufanana doro minda uye Oktoberfest. Saizvozvo, Mutambo uyu doro ave guta yepamwoyo-chakavanzika. Zviri chaizvoizvo kunyange mukuru Oktoberfest, Akatanga nepakati ekuma1600, kubudikidza Munich kuti Paulaner mamongi uye Paulaner Nockherberg ndiyo yokutanga vakatozodzokera doro mutambo simba Munich raMwari!
Aunganidze zvinhu: starkbier ane doro simba, zviri kwasimbiswa doro kugutsikana asiwo ichiputswa nezvishoma, kuchakuzadza uye nyangarara imi. Iwe vanyeverwa!
Nepo huru Supermarket ngetani uye kunotenga nehoro vanogona kugamuchira kadhi rako rokubhengi, vakawanda maresitorendi uye zvitoro muMunich chete kugamuchira mari kana EC-makadhi (izvo vakafanana debit makadhi). Ivai nechokwadi chekuti euros zvakakwana nemi kuti kushandiswa kwezuva nezuva.
Unoda bhuku chitima tikiti kuna Munich? Zvadaro musoro pamusoro kuti SaveATrain apo uchafarirwa. tikiti renyu mumaminitsi pamwe No peaky, mamwe nezvakavanzika mari!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/nockherberg-starkbierfest-munich-beer-festival/ - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#Beerfestival #NockherbergStarkbierfest #simba doro tapping #TraveltoMunich bere Travel mutambo drink Munich
Top Yoga vanotiza In Europe And Zvakaoma Kusvika Ikoko By Train